Deluxe Wickaninnish Inn kuTofino kuVancouver Island
01 ye 05
Zvaunotarisira paWickaninnish Inn kuTofino, Vancouver Island, Canada
Wickaninnish Inn inogadziriswa zvikuru kuVancouver Island. © Wickaninnish Inn
Chii Chinokonzera Wickaninnish Inn kuBhuku-Dhiziyo Iriyo?
Wickaninnish Inn inopembererwa nehotera yepamusoro mune imwe nzvimbo yakasikwa yeBritish Columbia. Inogara pamagumo emugwagwa pamhenderekedzo yeVancouver Island . Mamiriro ekunze anonakidza echitsuwa chacho anotora nguva yechando-vatariri vanobva kumativi ese.
Wickaninnish Inn iyo inhengo ye-ultra- prestigious Relais & Châteaux association . Yakatarirwa neVatambi + Leisure readers sekwavo # 1 Canadian resort muna 2012, 2013, 2014, uye 2015.
• Inonzwa yakafuridzirwa? Tarisa Hipmunk nzvimbo yepamusoro uye mazuva paWickanninish Inn
• Uye ona ndege dzeVancouver ne fares Hipmunk inouya neyo
Chiratidzo Pamusoro peWickaninnish Inn
Iyo imba yevasungwa inowanikwa nemuongorori wemuongorori Charles McDiarmid, uyo akavaka hoteli yake pachake nerubatsiro kubva kune vashandi vomunharaunda nababa vake, chiremba wenyika.
Wickaninnish Inn yakavhurwa muna 1996. Chivako chepakutanga, The Pointe, chinogadzira nzvimbo yekudyira iyo inopa maonero anoshamisa eClayoquot Sound, UNESCO Biosphere Reserve. Ihotera ye ultra-modern Beach Beach yakawedzerwa muna 2003.
Zvaunotarisira paWickaninnish Inn
Nzvimbo yacho inopa vafambi vekugara zvakanaka:
• Zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye kuwedzera
• makamuri makumi matatu nemasere uye masitei anowirirana nechechi yeVancouver Island
• Zvokudya uye zvinonaka zvinobva kunzvimbo dzekudya uye tsika
• Basa rakanaka kwazvo, kubva pakatarisa kusvika ku checkout, kubva kune vechiduku, mitauro mitauro, vashandi vemarudzi ose
• Yakanaka yekare yeCedars Spa
• Chirongwa chekuvaka muviri nemaonero uye zvigadzirwa zvemamiriro ehurumende
• Tarisai Library, imba yakanakisisa yevaeni uye chigaro chekumutsara-mberi kwe nyaya inotenderera
• Driftwood Café, munharaunda yaunoda, pamwe nemenyu yakagadzirirwa kugovana
• Mutevedzeri wekugadzirisa purogiramu yemagariro uye "Ruffing It" purogiramu
Kugadzikana Kwemavara eWickaninnish Inn
Wickaninnish Inn iri muToffino, Canada, kumadokero kwegungwa reVancouver Island. iyo Inofamba + Leisure vaverengi vanovhota seNorth America's Top Island. Kugadziriswa kwaToffino, uko miti inosangana nechisimba, inofadza zvakanaka. Imba yacho inofadza kufamba kwemaawa mashanu kubva kuVictoria, kana kuti pfupi pfupi, yakafanana neyekutiza kubva muguta reVancouver.
• Tarisa Kuvhara kwendege uye kuenda kuVancouver
What's Near Wickaninnish Inn?
Vashanyi vanogona kuenda kune:
• Guta reTofino, ine nzvimbo dzakawanda dzekutoro uye mabhizinesi, kufamba kwemaminitsi makumi maviri nemakumi maviri kubva panzvimbo yacho. (In Inn inopa mabhasikoro anoyevedza kune vashanyi vasingadi kufamba)
• Chesterman Beach, pedyo nehotera
• Nzira dzinoverengeka dzekufamba-famba dzinofamba-famba dzakapoteredza gungwa
• Gwaro Rokuputika, iyo yakawanda yemapurisa akasiyana-siyana emapuranga uye zvipfeko zvekushongedza zvakasikwa nemuti wemapuranga akayeredzwa Henry Nolla neboka rake
Iwe uchawa nekuda kweWickaninnish Inn? Tora mibvunzo >>
Will Wickaninnish Inn Ive Yakarurama Vancouver Island Hotel Kwauri?
The Point lounge paWickaninnish Inn. © Chris Pouget
Ungada Kurasikirwa Nokuderera-Dutu-Kutarisa paWickaninnish In?
Wickaninnish Inn inogona kunge iri yako yakakwana yekugadzikana kana:
• Unotsvaka maRelais & Châteaux mahotera nokuda kwehupfumi hwavo
• Unoda gadziriro, isina kugadziriswa uye inogona kupinda munguva yechando-kutarisa
• Unotsvaka hukama hwakanyarara nomumwe munhu anokosha
• Iwe unomiririra pane imwe nzvimbo yekutoro muhotera yedu
• Unofarira kuzviisa mune imwe nzvimbo inotyisa
• Uri kuronga mabasa ezvisikwa akafanana newa birdwatching, hove, kufamba, mabhasikoro
• Icho chaicho chirevo chekucherechedza dutu iwe
• Uri kufamba nemhuka yako
• Zvinyorwa zvako zvebhaketi zvinogona kushandisa nekufema kuisa nyika inn
Wickaninnish Inn inogona kunge isiri iyo yakanaka yehotera yeVancouver island kana:
• Unosarudza tsika dzekare, Old World zvigadzirwa zvemazuva ano
• Uri kutarisa pane-nzvimbo yehusiku husiku
Makamuri ekutarira-ane tsitsi paWickaninnish Inn >>
Room Premier paWickaninnish Inn. © Chris Pouget naDuncan Booth
Makamuri, Suites, & Zvimwe Zviratidzo paWickaninnish Inn
Makamuri makumi manomwe nemazana makumi maviri nemaviri eWickaninnish Inn dzakagadzirirwa zvakanakisisa uye dzakanaka kwazvo, dziine feniti dzakagadzirwa nemaoko, yakawanda nzvimbo yekamuri, uye wifi inobatsira.
Chesterman Beach Loft Suite ine nzvimbo yemoto inosvibisa, bhedha yamambo pamwe nehosi yakashandurwa sofa, chivako chikuru, uye dorox pokugara mu1 100 square feet yekugara nzvimbo.
• Tarisa makamuri eimba yevaeni
Room My Deluxe paWickaninnish Inn yaiva yakakura uye zuva. Mahwindo aro akareba akatarisa kune imwe nzvimbo yePacific yakazara, yakasviba neupenyu hwemvura.
Zvishandiso muWickaninnish Inn Rooms
Makamuri epaeni uye masuo kuWickaninnish Inn kazhinji ane:
• Gadzirai mabhedha amambo ne-high-denier makotonti eEgipita
• Gasi moto moto
• Zvipfeko zvakawanda nezvipfeko, ironing board, slippers, uye yakachengeteka
• A Douglas fir anonyora mahwendefa, tafura yekedari yemisidhari, uye zvinhu zvekushongedza miti
• Inzvimbo inofadza inobatsira uye nzvimbo yeBritish Columbia mazambiringa
• Kubvumirana mu-mukana wei nekofi
• Zvibereko zvebhasika
• Zvake-uye-zvisingasviki mabhodhoro eThermos, chirongo chemvura yakasvibiswa, nemamera
• Helly Hansen nguo dzechando kuVancouver Island mvura
• Bhinomi yeBushnell yekugadzira shiri uye kuongorora-kutarisa
• Wifi yamahara
Posh Guest Bathrooms paWickaninnish Inn
Nzvimbo dzokugezera dzevashambazi-spa, kufanana ne:
• Nemavara akangoita slate tile pasi
• Bhati yakakura, imwe yakakura kwemaviri
• Chiparadzanisa machira-akavhara mvura
• Douglas fir sliding panels for privacy
• Zvakawanda zvekamberi uye nzvimbo yekodhi
• Frette tipei uye mabhatiro emvura
• Pamusoro-kuguma, kuCanada-yakaitwa Comfort Zone toiletries
Chinhu chinokanganisa kamuri paWickaninnish Inn chave chisipo. Muridzi, Mr. McDiarmid, uye vashandi vake vakafunga nezvezvose.
Verenga pamusoro pekutyisa, spa, & gym paWickaninnish Inn >>
Dining, Drinking, Fitness & Spa paWickaninnish Inn
The Pointe Restaurant paWickaninnish Inn. © Peter Jackson
Zvokudya paWickaninnish Inn
Kudya kunobva mukurongeka kuno, neine nzira dzakasiyana siyana.
The Pointe Restaurant paWickaninnish Inn
Wickaninnish Inn yakanakisisa yokudyira restaurant, The Pointe, inyanzvi yekudya ye deluxe ine panoramic ocean view uye zvine musoro tabs.
Mutungamiriri Nicholas Nutting anowana mufananidzo mukuru, zvakare. Anonyanya kuzivikanwa mupurazi-itsva yezvokudya zvehupenyu. Zvinonakidza zvinyorwa zvidyo zvinosanganisira mbatata-crusted oysters uye fresh halibut ne yogurt muto.
The Pointe ndiyo nzvimbo yewaini yayo, yakasimba paBritish Columbia wineries; zveshokokoti zvayo; uye yeSvondo Champagne Brunch yayo.
• Ona nzvimbo yePointe uye menu s
IPointe's bar hand-mixes cocktails yekusika. Vamwe vane chinyorwa chemoto chemusasa, uye chingave chakaita marhrisk margorika. Tsamba yakawanda ye-single-malt Scotches inosanganisira vamwe ne smoky peat flavor.
Kubasa kwekamuri paWickaninnish Inn inosanganisira menu yePointe. Vashanyi vanogona kunakidzwa nezvinhu zvakadai sequinoa-crusted Tofino saumini, kana Berkshire nyama yenguruve nehacheki yakabikwa uye yeha inoputika. Imba yebasa-yekudya yemedheni inotakura ndiro dzakakoshwa sezvakaita gorosi Pacific octopus kana Dungeness crab nemapfupa emapfupa.
Driftwood Café inzvimbo yakachengetedza, nzvimbo yakanyarara umo kafi uye mapeji anoshanda.
Fitness paWickaninnish Inn
Mukati-pakati pekudya indulgences, Wickaninnish Inn vashanyi vanogona kushanyira nzvimbo yaro yehutano uye vanotora mahara ayo.
• Chimiro chekuzvidzivirira chinosungirirwa nemichina yakakosha yemotokari, zvigadzirwa zvepachena, makate uye zvakadaro
• Vashanyi vanogona kushandisa mabheji mabheji
Yakare Cedars Spa paWickaninnish Inn
Wickaninnish Inn's full-service Makedheni eCedars Spa ndiyo nzvimbo yakazara yakagadzirirwa yakagadzirirwa zvakakwana sedanda remisidhari.
• Gara rekufungisisa runyararo rine bluff yenyika kunze
• Zvimwe zvakasiyana-siyana zvema spa zvinosanganisira mauto, masheji, mani-pedis, uye makirasi e yoga
• Nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo pamwe nemishonga yekurapa uye zviyero
Tsvaga kuti ungabatana sei ne & Wickaninnish Inn >>
Wickaninnish Inn inokumbira mhuri yose kuti ishanyire. (Yese mhuka yeAmerica inoda kupinda BC inoratidza kuti rabies yakapfura mukati memakore matatu apfuura). © Dane naDane
Ramba Uchienda naWickaninnish Inn
• Wickaninnish Inn's website
• Pamusoro pe Facebook
• Pamusoro pe Twitter
• Mifananidzo paPinterest
• Nefoni 800.333.4604
Osprey Lane kuChesterman Beach
Zvimwe zvakanakisisa Relais & Chateau x hotele paIkufambisa Kwakanaka:
• Pedyo neSan Diego, Rancho Valencia
• Kumucheto kweAdrondacks yeNew York, The Point
MuSanta Fe, New Mexico, Inn of the Five Graces
• MuQuebec City, Canada, Auberge Saint-Antoine
• Munharaunda yeAlggarve yekuProga, Bela Vista Hotel
• MuIstria region yeCroatia, Villa Meneghetti
Sezvinowanzojairika mumabhizimisi ekufambisa, Munyori weMugove akapiwa nerwendo rwekunyora kuitira kuti atsanangure imba yevasungwa. Kuti uwane mamwe mashoko, ona shanduro yedu ye Ethics Policy.
Mazano ekushandisa Dhidhi uye Makadhi Makadhi muCanada
Yurt Holidays muCanada
Zvinhu Zvisingafaniri Kuitika Paunofamba kuenda kuCanada
Mabhiza Akanakisisa muCanada
Mvura Country USA - Williamsburg, Virginia Water Park
Yako Inotungamirira Mukuratidza Kuzvipira Pakupera Kwegore
Nasi Goreng: Indonesi yeRond-Based Breakfast yeMitambo
Nei Uchifanira Kufamba?
Vashanyi Vanotungamira kuMabvazuva kweMhenderekedzo yeMadlands
PaIndaneti: Pamberi peChechi neHollywood muAtlanta
Anguilla Attractions: Zvinhu Zvikuru Zvokuona uye Kuita pachiwi cheAnguilla
Zvinhu Zvikuru Zvokuita munaJuly muSt. Louis
Arizona Science Center / Heritage Square Map uye Mazano
Rudo rwemaRoma ruri muPacific Northwest
March Kupera muCanada Mazororo Mazano